Harvey Law Group appointed as official Southeast Asia’s representative firm for Range Development’s latest branded pool villa resort expansion – LYCA COMMUNICATIONS
Harvey Law Group appointed as official Southeast Asia’s representative firm for Range Development’s latest branded pool villa resort expansion
Date: May 25, 2018Author: Rahul0Comments
Yangon – May 25, 2018 – Steeped in legendary seafaring history dating back hundreds of years, the Eastern Caribbean island of St. Kitts & Nevis is the newest exotic destination for Six Senses Hotels Resorts Spas.
Overlooking the resort’s nature reserve, Six Senses St. Kitts will featureamenu of Six Senses speciality treatments as well as Caribbean healing traditions and rejuvenation journeys, Six Senses Integrative Wellness, detox, yoga and workshops.
To the south of the resort is Sandy Point Town, the second largest town on the island. Sandy Point is the entranceway to Brimstone Hill,aUNESCO World Heritage Site and just one of the many fascinating excursions that await history enthusiasts. Located on the western side of the island, the site for Six Senses St. Kitts is approximatelya30-minute drive along the scenic coast road from the capital Basseterre and the International Airport (SKB). The airport is served by direct flights from the United States, Canada and the United Kingdom, with connecting and charter flights from Europe and regional services from several Caribbean nations.
“We are excited to welcome Six Senses to St. Kitts and delighted to announce it from the capital of the fastest growing economy in South East Asia, Yangon,” said Mohammed Asaria, founder of Range Developments. “Six Senses was recently voted the world’s best hotel brand by Travel +Leisure magazine and we look forward to working together on this exciting project.”
Mr Bastien Trelcat, Managing Partner of the leading investment immigration firm Harvey Law Group for South East Asia added “Harvey Law Group is honoured to collaborate one more time with Range Developments and the Government of St Kitts & Nevis for the Six Senses project as the exclusive service provider for South East Asia of 100 shares coming withafinancing option. St Kitts boasts the longest established Citizenship by Investment Program in the world presenting opportunities to obtainawell-recognized passport for you and your family.”
Investing in Six Senses St. Kitts will entitle you and your family to apply for citizenship of St. Kitts & Nevis throughagovernment-sponsored program:
A $220,000 USD investment (throughalimited partnership structure) in Six Senses St. Kitts is required in order to qualify to apply for citizenship of St. Kitts & Nevis.
Financing available over2years
Citizenship is for life for the investor, spouse, parents andanumber of eligible dependents, and citizenship is passed down through generations. Applicants are not required to visit or reside in St. Kitts.
Dual citizenship is permitted and opens to all nationalities, without any requirement to notify the applicant’s home country.
St. Kitts & Nevis offersafavourable business development environment where the currency is pegged to the US dollar.
Exit options provide the ability to realizeacapital gain and income generation on investment.
Mr Jean Francois Harvey, Global Managing Partner
Mr Bastien Trelcat, Managing Partner Southeast Asiaacaption
About Harvey Law Group (HLD)
Harvey Law Group (HLG) isaleading multinational law firm specializing in corporate law and investment immigration withaworldwide reputation for representing high-profile clients and corporations, with over 19 offices worldwide. As the top immigration consulting law firm, HLG offers the most comprehensive residency and citizenship programs available to date.
HLG was awarded for Best Immigration Firm at the 13th annual Macallan ALB Hong Kong Law Awards 2014 and 2017. For further inquiries on exclusive financing option or investment immigration program opportunities, please visit www.harveylawcorporation.com
နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ် (Citizenship by Investment, CIP) Six Senses Saint-Kitts နှင့် Nevis ပရောဂျက်ဖြင့် Range Development ၏ နောက်ဆုံးပေါ် pool villa အပန်းဖြေစခန်းအတွက် တရားဝင် အရှေ့တောင်အာရှကိုယ်စားပြုကုမ္ပဏီအဖြစ် Harvey Law အဖွဲ့အားပေးအပ်
ရန်ကုန်၊ မေလ (၂၅)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာစုပေါင်းများစွာခန့်က ပင်လယ်စူးစမ်း လေ့လာရေးခရီးစဉ် ဒဏ္ဍာရီ မှတ်တမ်းများထဲတွင် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သော ကာရေဘီယန် အရှေ့ပိုင်း ကျွန်းများဖြစ်ကြသည့် St. Kitts နှင့် Nevis ကျွန်းများသည် Six Senses Hotels Resorts Spas အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကောင်းအောင် ထူးခြားဆန်းပြားသော လည်ပတ်စရာ နေရာအသစ်များ အဖြစ်ဖန်တီးပြီး ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်နိုင် အထင်ကရ နေရာများဖြစ်သည်။
ကာရေဘီယန်ပင်လယ်ကြီးကို မျက်နှာမူထားပြီး ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် လှပတင့်တယ်စွာ ဖြန့်ကျက်ထား သော သဲသောင်ဖွေးဖွေး ပင်လယ်ကမ်းခြေထံ တဖြည်းဖြည်းနိမ့်ဆင်းသွားသော တောင်ကုန်းငယ်လေးပေါ်တွင် ယခင် ကတည်ရှိခဲ့သော ကြံသကာထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ တည်နေရာတွင် အပန်းဖြေစခန်းကို တည်ဆောက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အပန်းဖြေစခန်းတွင် ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်သွားရန် လျာထားသော pool villa ပေါင်း (၇၀) အပြင် The Retreat တွင်လည်း လာရောက်တည်းခိုကြသော ဧည့်သည်များအနေဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိသားစုများ၊ ချစ်ခင်ရသူများနှင့်သော်လည်းကောင်း ရင်းနှီးမှုပိုမိုစေနိုင်ပြီး ရှုပ်ထွေးဆူညံ လှသော မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုမှ ခဏတာ ခွဲထွက်နိုင်မည့် သာယာကြည်နူးဖွယ် စိတ်ခံစားချက် ကိုပေးစွမ်းနိုင်သော သဘာဝ အတိုင်း လှပသာယာသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ခမ်းနားသော ပင်လယ်ပြင်အလှတို့ကို ခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် ရေကူးကန်ငယ်လေးများ အသီးသီးပါဝင်သော ထို pool villa (၇၀) ၏ ရှုထောင့်အလုံးစုံသည် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည့်အပြင် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ပြန်လည်ဆန်းသစ် အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်း ကိရိယာများကို အသုံးပြုထားပြီး Six Senses ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး မထိခိုက်စေ ရဟူ သော ကတိကဝတ်အတိုင်း စစ်မှန်လျော်ညီအောင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။
အပန်းဖြေစခန်း၏ သဘာဝအလှတရားကို စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မည့် Six Senses St. Kitts တွင် Six Senses အထူးစပါယ်ရှယ် အပန်းဖြေ ကုထုံးများအပြင် ကာရေဘီယန် ရောဂါကုထုံးနှင့် အားအင် ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးမည့် ခရီးစဉ်များ၊ Six Senses Integrative Wellness၊ Detox အဆိပ်ဖယ်ခြင်း၊ ယောဂနှင့် အလုပ်ရုံ များလည်း ပါဝင်ပါသည်။အပန်းဖြေစခန်း၏ တောင်ဘက်အရပ်တွင်တော့ ကျွန်း၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော် ဖြစ်သော Sandy Point မြို့ တည်ရှိပါသည်။ Sandy Point သည် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်နေရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သမိုင်း ရာဇဝင်များကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများကို ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်နေသော လေ့လာရာနေရာ တစ်ခုဖြစ်သော Brimstone တောင်ကုန်းသို့ ဦးတည်ရာ ဝင်ပေါက်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်း၏ အနောက်ဘက်ခြမ်း တွင်တော့ Six Senses St. Kitts သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်နှင့် မြို့တော် Basseterre မှ ရှုမငြီးဖွယ် ကမ်းရိုးတန်းကားလမ်းမကြီးမှ မိနစ်(၃၀)ခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ လေဆိပ်တွင်တော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံများမှ လေယာဉ်များ တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်ပြီး အခြားဥရောပဒေသ များနှင့် ကာရေဘီယန်နိုင်ငံ အတော်များများမှ ဒေသတွင်း လေကြောင်းလိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ရှိပါသည်။
Six Senses St. Kitts သည် ဇိမ်ခံကာရေဘီယန် အပန်းဖြေစခန်းများကို ဒီဇိုင်းတီထွင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်၊ စီမံ ခန့်ခွဲမှုနှင့် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအပိုင်းများတွင် Six Senses Hotels Resorts Spas မှ တာဝန်ယူ၍ Range Developments မှ အဓိက အထူးပြု ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားသော စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အပန်းဖြေ စခန်းကိုအချိန်ကာလ(၃)နှစ် အတွင်းပြီးစီးရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
“Range Developments ကနေပြီးတော့ အခုလို နောက်ထပ်စီမံကိန်း အသစ်တစ်ခုကို ယူဆောင်လာပြီး Six Senses ရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို နိုင်ငံတွင်း ဆောင်ကျဉ်းလာပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်ရပါတယ်” ဟု St. Kitts & Nevis ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ တင်မိုသီ ဟဲရစ်စ် (Dr. the Honourable Timothy Harris) မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းမှ ဆက်လက်၍ “ St. Kitts & Nevis မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို Range Developments ကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဖန်တီးမျှဝေပေးပါတယ်။ St. Kitts မှာ ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော် Park Hyatt တရားဝင် ခမ်းနားစွာ ဖွင့်လှစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အခုလို နောက်ထပ် ဇိမ်ခံဟိုတယ် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရဲ့ အခြေချရာ တည်နေရာဖြစ်ခွင့်ရတာဟာ ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုအတွက် သိပ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်သူ တွေနဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ Range Developments ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြသလိုက်တာပါပဲ။ St. Kitts နဲ့ Nevis ကလူတွေအားလုံးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအတွက် အခုလို Range Developments နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ပျိုးထောင်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Six Senses ၏ President ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဘာဟတ် ဘိုဟန်ဘာဂါ (Berhard Bohnenberger) မှ ပရောဂျက်ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပေါ် “ ခမ်းနား ပြောင်မြောက်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ St. Kitts ကို Six Senses ရဲ့ အပန်း ဖြေစခန်း portfolio ထဲမှာ အခုလို ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့အတွက် အရမ်း ကို ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကာရေဘီယန် ဒေသမှာ ပြောင်မြောက်တဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ အတွေ့ အကြုံ တွေ Range Developments နဲ့ တွဲဖက်ပြီး ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် ဒီ St. Kitts ဟာ ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ အပန်းဖြေစခန်း တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Six Senses St. Kitts ဟာ နိုင်ငံပေါင်း (၁၁)နိုင်ငံမှာ အခုလုပ်ငန်း ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Six Senses Group ရဲ့ ၁၆ ခုမြောက် ဟိုတယ် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
“Six Senses ကို St. Kitts ကနေ ကြိုဆိုလက်ခံရပြီး အဲဒီအကြောင်းကို အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု အမြန်ဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကနေ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခွင့်ရတာ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူ မိပါ တယ်။ Six Senses ဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ Travel + Leisure မဂ္ဂဇင်းမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဟိုတယ် အဖြစ် မဲပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ပရောဂျက်မှာ အတူလက်တွဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်” ဟု Range Developments ရဲ့ တည်ထောင်သူ မိုဟာမက် အာဆာရီယာ (Mohammed Asaria) မှပြောကြားခဲ့သည်။
အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ထိပ်တန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရွှေ့ပြောင်းကုမ္ပဏီ Harvey Law Group ရဲ့ Managing Partner ဖြစ်သူ ဘတ်စ်ရှန် ထရဲလ်ကတ် (Mr. Bastien Trelcat) မှလည်း “ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အဓိကသီးသန့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တွေပံ့ပိုးပေးတဲ့ Harvey Law Group ကအခုလို Range Developments နဲ့ရော St. Kitts နှင့် Nevis အစိုးရနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ St. Kitts ဆိုတာကလည်း လူတိုင်း၊ မိသားစုတိုင်းအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တစ်ခု ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီးပေးတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချိန်အကြာဆုံး တည်ရှိလာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Six Senses St. Kittsတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် အစိုးရမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးထားသော အစီအစဉ်မှတဆင့် St. Kitts နှင့် Nevis၏ နိုင်ငံသားအဖြစ် မိမိနှင့် မိသားစုအတွက်ပါ လေ ျှာက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
• St. Kitts & Nevis နိုင်ငံသားအဖြစ် လျှောက်ထားရန်အတွက် Six Senses St. Kitts တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၂၀,၀၀၀ ခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ အကန့်အသတ် ဖြင့်) ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်သည်။
• (၂) နှစ်ကျော်ခန့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရရှိနိုင်ပါသည်။
• ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ ၎င်း၏အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိဘနှင့် အရည်အချင်း ပြည့်မီသော အခြားမှီခိုသူတွေအတွက် နိုင်ငံသားခွင့်ပြုချက်သည် ဘဝတသက်ဖြစ်ပြီး မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမျာအနေဖြင့် St. Kitts တွင် နေထိုင်ရန် (သို့မဟုတ်) လည်ပတ်ရန် မလိုအပ်ပေ။
• St. Kitts နှင့် Nevis နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို လျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီး ခန့်မှန်းခြေ ရက်ပေါင်း (၉၀)မှ (၁၂၀)အတွင်း ခွင့်ပြုချထားပေးသည်။
• နိုင်ငံသားများသည် ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကျိုးအမြတ်များ၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဍားများ၊ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှုနှင့် အမွေဆက်ခံရရှိခြင်းဆိုင်ရာ အခွန်အခများ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
• St. Kitts နှင့် Nevis နိုင်ငံသားများသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ Schengen ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် ဗြိတိန်နေရာ အများစု အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၃၉) နိုင်ငံကျော်ခန့်ကို ဗီဇာမလိုအပ်ဘဲ သွားရောက် လည်ပတ် နိုင်ပါ သည်။
• နိုင်ငံသားလက်မှတ်တွင် St. Kitts နှင့် Nevis တွင် အပြည့်အဝ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် တို့ပါဝင်ပါသည်။
• နိုင်ငံ(၂)နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးပြီး လျှောက်ထားသူ၏ အမိနိုင်ငံကို ကြိုတင်အ သိပေး အကြောင်းကြားရန် မလိုအပ်ဘဲ မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို လျှောက်ထားနိုင်သည်။
• နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ပတ်ဝန်း ကျင် အသိုက်အဝန်း တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
• ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ဝင်ငွေတိုးပွားလာမှုနှင့် အကျိုး အမြတ်များကို သိရှိသဘောပေါက်နားလည်သွားရန် Exit Option များမှ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Harvey Law Group အကြောင်း
Harvey Law Group(HLG) သည် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် ရုံးခန်းပေါင်း (၁၉) ခုကျော်ဖြင့် နာမည်ကျော်ကြား ပြီး ထိပ်တန်းဝင်သော အလုပ်ရှင်များနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ကော်ပိုရိတ် ဥပဒေနှင့် ရွှေ့ပြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စသည့်အပိုင်းများကို အထူးပြုသော ထိပ်တန်း နိုင်ငံပေါင်းစုံ ဥပဒေ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားများအား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေး ဆောင်ရွက်နေသော ဥပဒေ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု အနေနှင့် HLG မှ ပြည့်စုံရှင်းလင်းသော နေထိုင်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံသား အစီအစဉ်များကို HLG မှ ဝန်ဆောင်မှု ပေး နေပါသည်။
HLG မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွှေ့ပြောင်း ကုမ္ပဏီ အဖြစ် (၁၃) ကြိမ်မြောက် Macallan ALB ဟောင်ကောင်ဥပဒေဆု ပေးပွဲတွင် ရရှိခဲ့သည်။ သီးသန့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း အစီအစဉ် အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Mr. Jean-François Harvey HLG World Wide Managing Partner (jfharvey@harveylawcorporation.com) နှင့် HLG Managing Partner ဖြစ်သူ Bastien Trelcat (btrelcat@harveylawcorporation.com) တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်လိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 959400534007 သို့မဟုတ် http://www.harveylawcorporation.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် Facebook Page https://www.facebook.com/HLGmyanmar/ မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Harvey Law GroupHLGLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon
Previous Previous post: First Mercure debuts in Myanmar
Next Next post: Harvey Law Group (HLG) offers an exclusive investment opportunity in South East Asia with the launch of Tommie Hotel Hollywood eligible to the US Green Card Program